Alatsinainy 01 martsa 2021 – FJKM
Alatsinainy 01 martsa 2021
Kristiana manana finoana tsara orina
Amin’ny foto-kevi-dehibe ao amin’ny bokin’ny Deoteronomia ny fitaomana ny vahoakan’Andriamanitra tsy hiala amin’Andriamanitra, hifikitra amin’Andriamanitra. Mariky ny finoana tsara orina izany. Ny tena Kristiana manana finoana tsara orina dia:
Tsy mora rebirebena (and. 2-4)
Mahagaga fa eo amin’ny fiarahamonina dia misy mandrakariva ny mpamitaka, izay mitaona ny mino hiala amin’Andriamanitra. Manao zavatra mahasarika sy mahataona izy ireny ka maro no babony ary tafasaraka amin’Andriamanitra. Efa nampitandreman’i Jesoa ny mpianany izany. Ary rehefa mandinika ny fiainam-piarahamonina isika dia maro tsy hita isaina izy ireny.
Isika, amin’ny maha Kristiana antsika dia manorina ny finoantsika amin’Andriamanitra sy amin’ny teniny. Izany ihany no hahatonga antsika tsy ho voatarika hiala amin’Andriamanitra, na dia mahataona antsika tokoa aza ny fitaka eto amin’izao tontolo izao.
2. Matahotra an’Andriamanitra (and. 5, 6)
Ny tahotra an’Andriamanitra no mahatonga ny mino mifikitra amin’Andriamanitra. Rehefa matahotra an’Andriamanitra ny mino dia tsy miala Aminy ary mitandrina tsara ny didiny. Noho ny tahotra an’Andriamanitra koa dia manaiky hozahan-toetra ny mino ary izany fizahan-toetra izany no mampifikitra bebe kokoa ka tsy hiala Aminy.
Tsy araka izay hiheveran’ny maro azy ny fizahan-toetra marina fa mety mafy izy kanefa vao maika mampifikitra fa tsy mampifanalavitra amin’Andriamanitra velively.
Fanontaniana : Inona avy no fitaka mampisaraka ny mino amin’ny Tompo?